ယခုနှစ်အကုန်တွင် Wayland 1.0 | Linux မှ
ယခုနှစ်အကုန်တွင် Wayland 1.0
Wayland, ကျွန်တော်တို့ကိုမှအခြားရွေးချယ်စရာကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်ဟုသောဂရပ်ဖစ်ဆာဗာ Xorg မကြာခင်မှာပဲဗားရှင်း ၁.၀ မှာဖြစ်လိမ့်မည် (အချို့ကသင်ရွေ့လျားနိုင်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်)
၏ပထမ ဦး ဆုံးတည်ငြိမ်ဗားရှင်း Wayland ယခုနှစ်အကုန်တွင်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်၊ အသေးစိတ်ကိုစီမံကိန်းကိုဖန်တီးသူကတင်ပြခဲ့သည် (Kristian Høgsberg) en FOSDEM.
ဗားရှင်း ၀.၈၅ ကိုဖြန့်ချိရန်မှတ်သားထားသည် အဆိုပါ git repository ကို စီမံကိန်း၏တစ်နှစ်ပတ်လုံး RC ကိုရောက်ရှိသည်အထိလျှောက်ထားရမည် (ကိုယ်စားလှယ်လောင်းထုတ်လွှတ်မည့်သူ) နှင့်နှစ်ကုန်ဗားရှင်း ၁.၀ (ယခုတည်ငြိမ်သော) အပြီးတွင်ထုတ်ပြန်မည်။
Høgsberg (စာရေးသူ Wayland) သူသည် ၀ န်ထမ်းဖြစ်လာသော ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စီမံကိန်းကိုစတင်ခဲ့သည် ဦးထုပ်နီယခုအလုပ်လုပ်သည် Intel က။ ဤစီမံကိန်းသည်လက်ရှိ hardware နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သဟဇာတဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ သို့ဆိုလျှင်၎င်းတို့သည်အဟောင်း / ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုလည်းထောက်ပံ့နိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မျှော်လင့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည် GNU / Linux ကိုအမြဲတမ်းလိုလိုအသုံးချပြီး၎င်းအားရပ်တန့်လိုက်သောဟာ့ဒ်ဝဲအတွက်အသုံး ၀ င်သောသက်တမ်းကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။
တစ်ချိန်ကလွန်ခဲ့တဲ့ငါတို့ဖတ်နိုင်ဘူး Ubuntu သည်ပုံမှန်အားဖြင့် Wayland ကိုထည့်နိုင်သည် (Xorg ကိုအစားထိုး), Wayland ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရှည်လျားပေမယ့်ရှည်လျားသောလမ်းရှိသေးကြောင်းမြင်လျှင်ပြီးနောက်ရိုးရိုးသားသား, ငါကမှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်မထင်ကြဘူး ၀_oU ...
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ယခုနှစ်အကုန်တွင်အချို့သော distro များကကျွန်ုပ်တို့အားအခြားဂရပ်ဖစ်ဆာဗာကိုစမ်းသပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » ယခုနှစ်အကုန်တွင် Wayland 1.0
အကယ်၍ Wayland ကိုတည်ငြိမ်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်လျှင်၎င်းသည်ဂရပ်ဖစ်တွင်ထူးခြားသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်သည်ထိုတည်ငြိမ်သောဗားရှင်းကိုကမ္ဘာအဆုံးတိုင်အောင်နာရီနှင့်ချီ။ သာစမ်းသပ်လိုသည်။ 😉
Wayland ဟာဟာ့ဒ်ဝဲအဟောင်းနဲ့သဟဇာတဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Xorg ကို graphical server တစ်ခုအနေနဲ့အမြဲတမ်းသုံးလို့ရတယ်၊ အဲဒါကမလိုအပ်ဘဲ Wayland ကုဒ်ကိုအလွန်အမင်းမှေးမှိန်သွားစေလိမ့်မယ်၊ Xorg?
Wayland သည် graphical server တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အကြား protocol တစ်ခုဖြစ်သည် တေးရေး နှင့်သင့်ဖောက်သည်များ။ Wayland ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် X ဖောက်သည်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းရန်နည်းလမ်းမှာ Wayland ကိုလက်ခံရန် XOrg ကိုပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည် input ကိုအစား KMS ၏။
၎င်းသည် protocol တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည် graphical server တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်သည် (သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်)၊ ဖြစ်ရပ်များကိုအခြေခံသည့် Xorg နှင့်မတူသည်မှာ Wayland ကသူတို့ကို Kernel သို့တိုက်ရိုက်လွှဲအပ်သည်သို့မဟုတ်၎င်း element များနှင့်လည်းဆက်သွယ်ပါက သူတို့အားလုံးကိုအစီအစဉ်တစ်ခုတည်း၌မထားပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်လွတ်လပ်ပြီး Wayland သည် DRM, GEM, KMS စသည်တို့နှင့်ဆက်သွယ်သည်။
Wayland ကိုစမ်းသပ်ရန်တစ်စုံတစ်ယောက်က LiveCD ကိုဖန်တီးပြီးဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုအသုံးပြုရန် Fedora ကိုလည်း sign up လုပ်ထားပါတယ်။
Wayland သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဖော်ပြခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်ကြားဖူးသော်လည်း Ubuntu က၎င်းကိုဂရပ်ဖစ်ဆာဗာတစ်ခုအနေဖြင့်ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည့်တိုင်၎င်းဆာဗာတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆင်တူသောအရာတစ်ခုရှိပါကကျွန်ုပ်အားရှင်းပြမည့်မည်သူကိုမျှရှာမတွေ့ပါ။ သူကပြောတဲ့ပြတင်းပေါက်များ Directx (ငါအများကြီးမေးပေမယ့်ငါပြောနိုင်တာကိုခွင့်လွှတ်ပါ)
Polly, Linux အတွက်အကောင်းဆုံး Twitter client
Google Docs Linux တွင်ရုံးသုံးအလိုအလျောက်ပြုလုပ်မှုအတွက်အထောက်အကူတစ်ခုလား